Amaphupho ngezimpisi – iAfrika
Njengokuphupha inyoka, ukuphupha impisi kubika ukuba khona kwesitha esiyingozi kuwena. Lesisitha kusuke kungumuntu omkhonzile kakhulu, wena ozitshela ukuthi ubudlelwano benu naye buhle kakhulu. Kungaba yilunga lomndeni wakho, kungaba ngomunye wabangani bakho, kungaba ngumakhelwane wakho, noma futhi kube ngumuntu osebenza naye – lezi yizibonelo nje ezimbalwa. Uma uphuphe izimpisi ezingaphezu kweyodwa, lokho kuchaza ukuthi kuneqembu labantu abayizitha kuwena futhi ukuzwana kwabo kuhlanganiswe wukuba yizitha kuwena.
Enye futhi incazelo lapho umuntu ephupha impisi ngeyokuthi lokho kungabikezela ingozi ekusaseni lalowo ophuphayo. Kanti uma umuntu ephupha ezingela futhi abulale impisi, lokho kungasho ukuthi lowo ophuphayo uzokulwa kumbe abe nengxabano nabathandiweyo bakhe.
5 thoughts on “Amaphupho ngezimpisi”
15/06/2021 at 11:42
Uma ngiphupha ngizungezwi yi zimpisi esimhlophe ngokwebala ezigugile kuchazi ukuthini?
16/12/2020 at 05:02
Ukuphupha ujampelwa yingwe ifuna ukudla wena straight likhulumani eliphupho?
Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngezingwe/
Nthabiseng Martha Mamaila
14/07/2020 at 01:26
Ngicela ukubuza ukuphupha ibhubesi neMpisi kujaha abanye, kodwa mina kungiyekela
Ungabheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngamabhubesi/